Iingcebiso ezili-10 zokufumana indawo yokuhlala yaBona baFundi abaBalaseleyo kwi-Central London 2022
Iingcebiso ezili-10 zokufumana indawo yokuhlala yaBona baFundi abaBalaseleyo kwi-Central London
Ukufunda phesheya kunokuba yeyona ndlela ilungileyo yokufumana ulwazi oluninzi, kodwa, ayisiyiqhekeza lekhekhe. Ukusuka kwivisa ukuya ekufundiseni nakwindawo yokuhlala uye kwimisebenzi yebhanki, kufuneka ucwangcise yonke into. Rhoqo ngonyaka kukho iitoni zabafundi bamazwe aphesheya abaza kuza kumbindi weLondon ujonge i eyona indawo yokuhlala abafundi.
Kuya kuba yimincili kakhulu kuwe ukuza kwindawo entsha. Kodwa, kutheni ubambe uchulumanco malunga nokucwangciswa okungaka xa unokuba neenkampani zokuhlala zabafundi ezinokukunceda ucwangcise yonke into. Apha, siza kutyhila ezinye iingcebiso eziya kukunceda ufumane indawo yokuhlala yabafundi kwesinye sezixeko ezibiza kakhulu kwihlabathi.
I-Scholarship isebenza ngokwahlukileyo kule nxalenye yehlabathi. Ngelixa abafundi beManyano yaseYurophu befumana izifundiswa ngokulula, abafundi bamanye amazwe banokungafumani mali zilula. Ezinye ze izifundi zokufunda ezinokuthi zijongwe ngabafundi bamanye amazwe kwiindleko zezifundo.
IiGates iCambridge Scholarship.
I-Rhodes Scholarships kwiYunivesithi yaseOxford.
I-Edinburgh yoPhando lweeScholarship zoMhlaba.
UDenys Holland Scholarship kwiYunivesithi yaseLondon.
IYunivesithi yaseBristol yeOfisi yeHlabathi yeeScholarships.
IYunivesithi yaseWest London International Ambassador Scholarship.
Ezi zifundo zinokuxhaswa ngurhulumente okanye yimibutho engekho phantsi korhulumente. Ukuhlawula abafundi ziyafumaneka kubafundi besidanga sokuqala. Ngelixa leenkosi, unokuba nakho ukufundisisa.
Zininzi iindlela ekufuneka uzizalisekisile ukuze ufumane ezi mfundo. Ukujonga inani leendleko zokuhlala kwabafundi kunye nezinye iindleko kwiiyunivesithi ezisembindini waseLondon, ukufumana isifundi okanye imali mboleko yomfundi ayiyongcamango imbi!
I-visa yabafundi kufuneka ukuba uyokufunda phesheya. Imithetho ye-visa ixhomekeke kwilizwe ovela kulo. Ukuba uvela kwi-European Union, iNdawo yezoQoqosho yaseYurophu, okanye iSwitzerland akukho sizathu sakhathazeka ngeVisa. Kodwa, ukuba ungumfundi wamazwe aphesheya kuneVisa inokuba ngumba.
Apha, iinkampani zokuhlala zabafundi ezifana ne-oxcee, azinakunceda kuphela ukuba ufumane indawo yokuhlala kodwa, inkxaso enkulu ye-visa. Ukuba ufuna umsebenzi wesingxungxo kunye nezifundo, uya kudinga imvume ekhethekileyo.
Zimbini iintlobo zevisa zokufunda phesheya. Enye yeefayili zexesha elifutshane kwaye enye yile I-visa yexesha elide. Ukuba ikhosi yakho ingaphezulu kweenyanga ezi-6, uyakufuna i-visa yexesha elide.
3. Amalungiselelo okufika
Kutheni sixoxa ngale nto? Kuba ukuba uceba ukukhangela indawo yokuhlala yabafundi kwisixeko esinjengeLondon kuya kufuneka ucwangcise. Ukuba ufika eLondon kukho izinto ezithile oza kuzifuna.
Khetha kwaye ulahle indawo
Ezi zizinto ezisisiseko onokuzifuna xa ufika eLondon. Ungatyelela isixeko kwiinyanga ezimbini ukuya kwezintathu ngaphambili. Kuya kukunceda ukhangele kwiindawo ezahlukeneyo zokuhlala abafundi kumbindi weLondon.
Ke, xa uqala ukukhangela kwiipropathi, kuya kufuneka ube nohlahlo-lwabiwo mali. Zininzi iindleko ezingaphandle kwemali yeekholeji kunye nendawo yokuhlala kwabafundi. Ezinye zazo zikho.
Iindleko zokuhlamba iimpahla
Ukudlula kwethala leencwadi
Kukwakho nokunxiba, ukuthenga, kunye nezinye iindleko. Kuya kufuneka ubale iindleko nganye kwileja yakho.
Elona qabane libaluleke kakhulu ekufumaneni eyona ndawo yokuhlala ibalaseleyo kwiimephu zaseLondon. Banokukunceda uqonde umgama ngqo wayo nayiphi na indawo yokuhlala eyunivesithi yakho. Apha, ungasebenzisa iimephu zikaGoogle. Inokukunceda ufumane umkhombandlela. Inokukunceda uqonde indawo ekuyo.
Enye indlela kukuzibonisa ujikeleze indawo. Ke, uya kuqonda ubungqonge indawo yokuhlala abafundi. Umzekelo, ukuba ufumana indawo yokuhlala yabafundi abatya imifuno yaseIndiya, kuya kufuneka ukhangele indawo ukuze ubone ukuba ngaba ikunika ukutya okunje eLondon.
6. Ukwabelana ngamagumbi
Xa ujonge indawo yokuhlala abafundi kumbindi weLondon, kukho iindlela ezahlukeneyo ezikhoyo. Ungajonga iiholo zaseyunivesithi. Ezi zitshiphu. Kodwa, banezibonelelo ezisisiseko kuphela. Kukho izindlu zabafundi. Kodwa, banokuba bexesha lokuphumelela!
Ezona zikhetha kakhulu zii-PBSA. Ezi ndawo zokuhlala zabafundi ezenzelwe iinjongo zinazo zonke izibonelelo. Ukusuka kwigumbi lokuphumla likamabonwakude ukuya kwi-intanethi yasimahla nakwifenitshala engaqhelekanga ukuya kwimimandla yokudlala, bonwabile ngokupheleleyo. Nangona zinokubiza. Ke, uyakufuna enye yeenkampani zokuhlala kwabafundi ecaleni kwakho eLondon.
Enye inkalo yendawo yokuhlala yimigaqo-nkqubo yokwabelana ngamagumbi. Kukho iindlela ezifana ne-3 Bedroom, indawo yokuhlala ezimbini, kunye nezinye zokuhlala kwabafundi eLondon. Ke, ngaphambi kokuba ukhethe indawo yokuhlala, jonga kwimigaqo-nkqubo yokwabelana ngamagumbi.
7. Izinto eziluncedo
Ii-PBSA zibonelela ngezona zixhobo zibalaseleyo. Unokuba nobusuku obukhululekileyo emva kweentetho ezikruqulayo. Banendawo yokuzivocavoca, imivalo, amathala eencwadi, iindawo zokudlala kunye nezinye izinto. Ezinye zazo zibonelela ngokufikelela simahla kwi-intanethi. Banikezela ngamathala eencwadi. Ngelixa abanye benendawo yokuphumla ye-cinema. Ke, awuphoswa ziimuvi zamva nje.
8. Inethiwekhi yeTyhubhu
Nokuba yeyiphi na indawo yokuhlala yabafundi onokuyikhetha, kufanele ukuba ibe kufutshane nesikhululo setyhubhu. Isizathu apha silula. Unemicimbi yolawulo lwexesha kubomi babafundi. Ke, ukuchitha ixesha elininzi ngexesha lokuhamba akukho kwisitya sakho.
Njengoko besesitshilo, ungathatha ityhubhu yokupasa okanye itreyini yohambo lwemihla ngemihla. Kodwa, isikhululo setyhubhu esikufuphi siyanceda.
9. Khu seleko
Khangela iikhamera zeCCTV, ii-keycards zedijithali, kunye neenkqubo zomlilo xa ukhetha indawo yokuhlala abafundi. Ungoyena mphefumlo uxabisekileyo kubantu obathandayo kwaye ngekhe uthande ukuwubeka emngciphekweni.
Akukho nto iqinisekileyo ebomini. Ke, i-inshurensi ayisiyombono imbi. Kubafundi be-European Union, urhulumente unamainshurensi okhathalelo lwempilo, kodwa, kubafundi bamanye amazwe, kufuneka uzithengele.
Ukusuka kwivisa ukuya kwi-inshurensi yezempilo, sixoxa phantse ngayo yonke into. Ewe kunjalo, izinto ezininzi zichaphazela izigqibo zakho. Kodwa, eyona ndlela yokufumana efikelelekayo indawo yokuhlala abafundi in kumbindi weLondon kukufumana uncedo lweengcali.
Ukuba unawo nawaphi na amathandabuzo ngokubhekisele kwindawo yokuhlala abafundi okanye kwizifundiswa, ke gqabaza kwicandelo elingezantsi!
Post Previous:Bangafumana njani abafundi baMazwe ngaMazwe kwiMfundo yeShishini kwi-Intanethi
Okulandelayo Post:Izifundo zasimahla ze-18 ze-Intanethi zeFiziki ezineSatifikethi saBafundi